Nahomby ny ‘Diaben’ny Aurat’ nokarakarain’ny vehivavy tany Pakistan na dia teo aza ny fandrahonana · Global Voices teny Malagasy
Natao tany amin'ny tanàndehibe Pakistaney samihafa ny diaben'ny vehivavy
Voadika ny 22 Janoary 2021 4:40 GMT
(Lahatsoratra tamin'ny volana Martsa 2020)
Sary avy amin'ny Diabe Aurat tany Lahore. Nahazoana alàlana.
Fanintelony nanomboka tamin'ny taona 2018, ny vondron'ny fikambanana feminista Pakistaney antsoina hoe Hum Aurtein (Vehivavy Izahay) no nikarakara ny Diabe Aurat (Diaben'ny vehivavy) mba hanamarihana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy ny Alahady 8 Martsa 2020. Na dia teo aza ny fandrahonana nataon'ny vondrona hiringiriny mpandala fivavahana mba hanakorontanana ny hetsika dia tontosa tao anatin'ny fiarovana henjana ny diabe tamin'ity taona ity tao an-tanàndehiben'i Lahore, Karachi, Islamabad, Multan, Quetta, Peshawar ary Sukkur.
Read more: Sévère retour de bâton contre une marche des femmes au Pakistan, menacée d'interdiction [fr]
Vehivavy an'arivony maro, olona niova fananahana, ankizy ary lehilahy no nandray anjara naneho ny fanohanany ary nanasongadina ny toe-javatra iainan'ny vehivavy, izay iharan'ny fampijaliana sy ny tsy rariny ary tsy manan-jo sosialy-politika sy ara-toekarena. Nitondra sora-baventy misy teny filamatra mitaky ny zo fototra nolavina tamin'izy ireo efa hatry ny ela ireo mpandray anjara.
Nisioka ny iray amin'ireo mpikarakara ny Diabe Aurat , Leena Ghani:
It’s time you join us, as we march into a brave new world! Upwards and onwards! ❤✊🏻#AuratMarch2020 pic.twitter.com/cNsfkaCkos
Gaga aho ary tena mbola tsy azoko mihitsy. Misaotra an'i Lahore tamin'ny nanaovana ny diabe aurat ho manan-tantara! Izany no mitranga rehefa miray hina ny vehivavy! Tsy azonareo sakanana izahay !!
Tonga ny fotoana hiarahanao aminay, rehefa miroso amin'ny tontolo vaovao feno fahasahiana isika! Mandroso miakatra hatrany!
Nizara ny sarin'ny rainy nandray anjara tao Islamabad nilanja sora-baventy manao hoe: “Ny zanako vavy, ny safidiny” i Sahar Tariq:
Izy no dadako !
Fiarahamonina anjakazakan'ny ray-lehilahy izay tsy amelana ny vehivavy hiteny amin'ny ankapobeny i Pakistan. Ho an'ny maro, ny Diabe Aurat no toerana azo antoka ahafahan'izy ireo maneho ny ahiahiny; na ny vondrom-piarahamonina niova fananahana aza dia mahatsapa fa afaka mizara ny zavatra niainany sy mitaky ny fiainana mendrika ho azy ireo.
Nanao diabe ho an'ireo niharan'ny herisetra ara-nofo sy ny fanararaotana aho androany. Mijoro miaraka aminareo aho. Tsaroako ianareo.
Nosoratana marker hanasongadinana ny vanintaonan'ny niharam-boina ity t-shirt ity.
Tamin'ity taona ity, niezaka mafy ireo antokom-pivavahana nanakorontana ny diabe ary nandrara izany mba tsy hisy intsony. Natao ny fanangonan-tsonia tao amin'ny Fitsarana Avo ao Lahore, Sindh ary Islamabad nanaovana fangatahana baiko hanoherana ny diabe sy ireo hetsika mifandraika amin'izany. Tsy nisy na iray aza tamin'ny fangatahana no neken'ny fitsarana. Tonga hatrany amin'ny fandrahonana mba hanafoanana ny diabe an-keriny i Maulana Fazl ur Rehman, filohan'ny ankolafy mpanohitra Jamiat Ulema-e-Islam (Filankevitry ny Manam-pahaizana Islamika).
Islamabad sy Karachi
Nisioka i Tooba Syed, mpikarakara ny hetsika ao Islamabad, hoe:
Nanao fihetsiketsehana sy nilahatra imbetsaka teto amin'ity tanàndehibe ity aho fa mbola tsy nahita olona maro nivoaka handray anjara toy izany. Nahafinaritra ianareo vehivavy tao Islamabad omaly. Izay te hanohy hanangana sy hikarakara. Mifandraisa aminay!
Nitatitra ny fanafihana ny filaharana tao Islamabad nataon'ny mpikambana avy ao amin'ny antokom-pivavahana elatra ankavanana ihany koa i Syed:
Izany no nanafihan'izy ireo anay. Nandefa “laanat” taminay izy ireo talohan'io fotoana io ary avy eo nikasa hanao herisetra ara-nofo aminay. Efa nisy vato sy kibay teny amin'izy ireo !
Nanohy i Syed:
Lazao anay indray hoe nahoana no matahotra ny diabe Aurat ity firenena ity. Avy amin'ireo mullahs romotra izay nikasa handratra sy hamono ireo izay mijoro am-pilaminana hiaro ny zony ny fandrahonana. Manamafy izany fandrahonana izany ny fanafihana ny diabe Aurat androany tao Islamabad.
Nanatrika ny diabe tao Karachi i Dua Mangi, mpianatra lalàna 20 taona izay nalaina ankeriny tamin'ny volana Novambra 2020. Voatifitra ary naratra i Haris Fatah Soomro, ilay lehilahy namany niaraka tamin'i Mangi tamin'ny fotoana nitrangan'ilay tranga ary nalaina baraka noho ny fiarahany tamin'ity lehilahy namany ity i Mangi avy eo.
Tena faly aho ! Tany amin'ny diabe Aurat tany Azadi i Dua Mangi sy Harris.
Diabe Aurat tao Sukkur. Sary avy amin'ny diabe Aurat tao Lahore. Nahazoana alàlana.
Nikarakara fivoriana ny vehivavy tao Sukkur andro iray talohan'izay ho fanoherana ny fandrahonana ataon'ny antoko ara-pivavahana, ary avy eo nanao ny diabe Aurat voalohany tao an-tanàndehibe tamin'ny 8 Martsa 2020.
Ao avaratr'i Sindh no misy an'i Sukkur, izay mazàna voataonan'ireo vondrom-pinoana mpandala ny nentin-drazana. Ny vehivavy ao amin'ity faritra ity dia mitafy burkas sy chaddars mba hanaronana ny vatany. Ny Diabe Aurat no karazany voalohany notontosaina tao Sukkur, izay ahitana ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy betsaka.
Niresaka tamin'i Arfana Mallah, profesora sady mpikatroka avy any Sindh ny Global Voices, izay nilaza fa “nandrahona ny vehivavy tao Sukkur ny ankolafy ara-pinoana, ka maro no tsy nety nandray anjara tamin'ity fivoriana ity. Saingy nandray anjara tamin'ny Diabe Aurat ihany ireo vehivavy taorian'ny fanomezan-toky avy amin'ny polisy sy ny mpitantana. Voageja sy iharan'ny vono noho ny fanjakazakan'ny lehilahy hatry ny ela ka mila mivoaka ankehitriny hitaky ny zony ny vehivavy ao amin'ity faritra ity.”
Manome antsika fiainana ao anaty hafaliana ny Diabe Aurat tao Sukkur
Nanao ny Diabe Aurat voalohany ihany koa i Multan, tanàna manan-tantara ao Punjab atsimo. Na eo aza ny maha-tanàna mpandala ny nentin-drazana sy mitodika amin'ny fivavahana azy dia vehivavy marobe no nandray anjara tamin'ilay diabe ary nankalaza ny andro tamim-pahavitrihana, nilanja sora-baventy mba hanehoana ny fihetseham-po izay tsy nohenoina hatry ny ela. Nisy ny fifandonana madinidinika rehefa nisy lehilahy iray nanao teny mahery tamin'ny mpandray anjara, ka niafara tamin'ny fifamaliana izay nalamin'ny mpitandro ny filaminana.
Nankafizinay ny diabenay noho izany, tsy nanararaotra na iza na iza, nanaja ary nanaraka ny lalàna rehetra napetraky ny mpitondra ao multan izahay saingy nanana fahasahiana nanantona ary niteny ity lehilahy ity fa “bayghairat” ireo vehivavy ireo
Fanoherana ny diabe
Mba hanoherana ny Diabe Aurat dia nisy vondrom-pivavahana sasany nikarakara ny Famoriam-bahoaka Haya (Fanetren-tena) tany Lahore, Gujranwala, Faisalabad ary Islamabad, mba hampandrosoana ny hevitra fa efa nanome hery ny vehivavy ny Islamo ary nilaza ny diabe Aurat ho hetsika vatsian'ny vahiny vola natao hanaratsiana an'i Pakistan sy hanasana ati-doha ny vehivavy.
Nisy ny vondron'olona nikarakara ny Diabe Mard (Diaben'ny Lehilahy), ary nikasa hiditra tao amin'ny kianjan'ny Diabe Aurat nilanja sora-baventy ho fanohanana ny mpanoratra tantara an-tsehatra Khalil ur Rehman Qamar, izay nifanasa vangy tamin'ilay vehivavy feminista mpamakafaka fanta-daza, Marvi Simid tao amin'ny fahitalavitra tamin'ny voalohandohan'ny volana Martsa.
Vakio bebe kokoa: Ny fanavakavahana ara-pananahana sy ny fankahalàna vehivavy tamin'ny seho resaka tao amin'ny TV pakistaney [mg]
Na izany aza, nanakana ireo lehilahy tsy hanakorontana ilay fivoriana ny mpitandro ny filaminana. Nisy ihany koa ny fikasana hanao Diabe Mard tamin'ny taona 2019, saingy tsy tanteraka izany.
Nisy ny Diabe Mard tao Karachi taorian'ny Diabe Aurat.